Miisaaniyda Sanadaka 2005 | Somaliland.Org
Miisaaniyda Sanadaka 2005
January 20, 2005	Dhaqaala xumida iyo gaajada Afrika ka taagan waxa ugu wacan maamul xumo, musuq, qaynuun xumo iyo dagaal joogta ah. Haddii miisaaniyada 2005 ee Somaliland aynu metal u soo qaadano intuba way ka muuqdaan (maamul xumo’u, musuq, sharci daro iyo qaban qaabo dagaal). Miisaaniyada haddaan loo isticmaalin sidii loogu talagalay waa denbi waxa iyana kale oo danbi ah cashuur aan la ansixin in la hirgeliyo. Waxa cad in labadaa denbiba laga galay ummada marka aad ka tilmaan qaadato miisaaniyadii loogu talagalay dhameystirka shuruucda sannadkii hore (2004) oo aheyd $79,923 oo lagu edeynaayo’u in Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Qeybe uu u isticmaalay si aan qaynuu’o'onka waafqsaneyn. Sida uu isaguna wasiirka maaliyadu golaha wakiilada ka hore qirtay cashuuur aan la ansixin ayuu hirgeleyay. Waxa weliba inta dheer in Wasiirku uu qirtay in kharashka ku qayaxan miisaaniyada (2005) qaarkood laga been fariimaayo. Haddaad u heysatay dawlada Somaliland in ay ku xad gudubto xuquuqol insaanka oo qudha dib isugu noqo. Distoorku ansixinta qawaaniinta waxa uu u xil saaray baarlamanka oo qudha. Wasiir iska daayoo xataa Madaxweynuhu ma ansixin karo Haddana waxa la ogyahay in sidii wasiirka maaliyadu (Cawil) uu ka qirtay baarlamanka in uu cashuuraha qaarna kordhiyay qaar cusubna sameeyay soo ururintoodana hirgeliyay iyada oo aanu baarlamanku ansixin. Taasi waxa ay kuu cadeyneysaa in Wasiirku u badheedhay in uu cashuur aan sharci ku salaysneyn hirgeliyo isaga oo aan baarlamankii waxba isaga tirineyn in uu sida uu doonnana ugu tagrifali karo. Tani waa mid hor leh oo ay tahay in xeer ilaaliyaha guud iyo baarlamanku ay ka hawl galaan. Nin walba halkii bugtaa isagaay belbeshaa miisaaniyadona haddi aan baahiba baahida ay ka mudantahay aan laga fuudh yeelin amba sidee loogu tala galay loo isticmaalin waa hal bacad lagu lisay. Haddaba miisaaniyada 2005 ee baarlamanku maanta ansixiyay waa mid sii dhid beysa siina baaheneysa baahida dhaqaale ee loogu tala galay in ay khafiifiso. Waa mid aan meel aan baahi jirin loo bedeyay, waa mid lagu badhxay cashuur aan sharci aheyn, waana mid lagu hafraayu agoomaha iyo Naafada, waa mid aan horumarkii wax la sheegi karo aan looga qoondeyn, waa mid Cabdi Xasan Buuni ka yeeshay boqorkii martiqaadka $7,123, waa mid Madaxweynaha iyo Mw/kuxigeeenka ka yeeshay kuwii ugu mushahar badna Madaxda Afrika iyo Europe, waa mid dakhligee dekkedda Berbera, dakhligee Haamaha TOTAL, kii madbacada iyo ili dhaqaali oo kalaba ka dul booday waa mid isku soo wada duuboo himilada Somaliland soof daran habaabinaaya. Cashuur aan la ansixin oo la hirgeliyaa waa kow. Waxa se caado noqotay in si kastaba ha lagu soo ururiyee ay in badani khasnada dawlada garab marto qaarna loo isticmalo si aan laaqi aheyn. Farsama xumida ceynkas ihi waay ku barra kicisaa. Waxana ka mid ah aan idiin horeyseeyo miisaaniyada Somaliland 2005 oo lagu qiyaasay ila iyo 22 milyon oo dollar ($1=6,739 S/L) boqolkiiba tobban (10%) iyo jar jar ($2,260,630) ayaa ku baxa mushaharka Madaxweynaha, Mw/ku-xigeenka iyo Madaxtooyada. Aan ku sii bal balaadhiyo. Labbiyo toban milyan oo dollar iyo weliba jarjar $12,120,276 waa xoolo dameer gooya. Xoolaha inta leegi marka laga shidaal qaato labbadii sanno ee u denbeeyay waxa weyaan musharka Madaxweynaha ($2,931,528), ka MW/kuxikenka($872,038) iyo kharashka Madaxtooyada ($8,316,710) shanta sanno ee ay xukunka heynayaan. Mushaharka intaa leeg ayo nin mar Hargeysa Mayor ka ahaan jiray madaxda UDUBna ka mid ah oo la yidhaahdo Caawl Elmi Cabdala uu mar uu magaalada Bristol ee ingreeska ka hadlaaya shir UDUB isugu timid kaga dhawaaqay in Madaxweynaha Mushaharka loo kordhiyo. Cawl la yaab ma laha oo markii uu Mayorka ahaa mushahar u xadidnaa ma jirin ee hadba inta kacantiiso qaado ayuu rujin jiray Sannadka maanta ah waxa aad moodaa in ay ka soo dhacday Madaxweynaha iyo MW/kuxigeenka waxa ay ka mushahar badan yihiin Madaxweynaha iyo MW/kuxigeenka Maraykanka oo mushaharkoodu ka la yahay $400,000 iyo $186,320 sida awgeed Rayaale waxa uu iska dhimay boqol kiiba labaatan (20%) MW/kuxigeenkuna boqolkiiba (5%). Taasina waxa ay mushaharkoodii hoos ugu soo riday sidan $385,876 iyo $170,827. Hadduu Rayaale is lahaa hakaa hadho mushahar kaga oo la garab dhigo ka Madaxweynaha Mareeykanka waxa uu iloobay in uu weli yahay Madaxweynaha ugu Mushaharka badan qaarada Africa iyo Europe ba. Dhinac kale haddi aad ka eegto Mushaharka Madaxweynuhu ($385, 876) waxa uu ka badenyahay miisaaniyada lix wasaaradood oo la isku darro kuwaas oo kala ah
) Xoolaha $95,656
) Beeraha $83,649
) Ciyaaraha $58,711
) Caddalada $34,994
) Macdanta iyo Biyaha $77,469 iyo
) Xidhiidinta Golayaasha $23,610.
Waxa kale oo la odhan karaa waxa ay is leeg yihiin miisaaniyada
Golaha Guurtida oo ah $399,189. Waxa aad inta ku darsataa Madaxweynuhu Kiro nal iyo biyo toona ma bixiyo. Xataa cashuurta musharka (payrolltax/income tax) askariga kurigeesa ilaaliya laga jarro Madaxweynaha lagama jarro. Waxa inta dheer W/Madaxtooyada oo Madaxweynaha hoos timaada oo uu sida uu doono u isticmaalo miisaaniyadeeda oo ah $1,703,923. Taa waan u soo noqon ee aan ku horeysiiyo kharashka ku baxa Ilaalinta Qasriga Madaxweynaha oo ah $276,297 kaas oo ka badan miisaaniyada lix (6) wasaaradood oo la isu geeyay oo kala ah
) Qoyeska $37,004
) Cadaalada $34,994
) Qorsheynta $43,950 iyo
) Macdenta iyo Biyaha $77,469
Haddaad sida Cawl aaminsantahay Madaxweynaha mushahar ku in uu ku yaryahay waxa aad xisabta ku darsataa miisaaniyada Madaxtooyado oo iyana ah $1,703,927. Taasi oo ka miisaniyad badan lix iyo toban (16) wasaradood iyo todoba hay’adood (7) oo la isku daray miisaaniyadood oo kala ah
) Duulista $218,708
) Macdanta iyo biyaha $77,469
) Reer Miyiga $98,486
) Kaluumeysiga $131,622
) Qorsheynta $43,950
) Boostada $79,673
) Diinta $61,449
) Dalxiiska $81,266
) Dib-U-dejinta $50,559
) Xidhiidhiska Golayaasha $25,610
) Ganacsiga $129,099 iyo
) Maxkamada Sare $66,323
) Xeerilaalinta Guud $68,733
) Hay’ada Shaqaalaha $ 76,714
) Haantidhowrka Guud $73,657
) Miina Saarka $30,928
) Qandaraaska $17,352
) N.D.C $36,846
MW/ku-xigeenku qudhidiisu dab yar shidi maayo. Mushaharka MW/ku-xigeenkuna waxa ay ka badantahy miisaaniyada afar wasaaradood oo la isku daray oo kala ah
) Diinta iyo Awqaafta $61,449
) Horumarinta Qoyeska $37,004
) Xidhiidinta Golayaasha $25,610.
MW/kuxigeenku talow ma og yahay in uu mushaharkiisu in ku dhow saddex (3) laab uu ka iyo
badan yahay miisaaniyada diinta iyo aw qaafta iyo in uu saddex laab (3 times) ka badan yahay miisaaniyada Jaamacada Hargeysa, Jamacda Camuud iyo machadka tababarka macalimiinta oo marka la isku darro isku noqonaaya $44, 520. Waxa kale oo iyana jira wasaarada badan oo aan loo baahneyn oo ay ka mid yihiin Wasaarada Madaxtooyada, War faafinta, Dalxiiska, Xidhiidhiska Golayaasha, Deb-u-dejinta, Duulista iyo qaar ka laba. Wasarada Dalxiiska oo kuwaa ka mid ah oo loo qoondeeyay miisaaniyad dhan $81,266 bal aan hoos u eegno. Shantii sannadood ee u danbeeyay miisaniyada lagu qoray dalxiiska waxa ay dhantahay $304, 081. Sida uu wasiirka dalxiisku sheegeyna shaqali ay leedahay ma jiro. Haddaba waxa la yaab leh in wasarada ninka qudhi horfadhiyo wax dakhli ahna aanu soo gelin ay ka miisaniyada badantahay miisaniyada toddoba (7) wasaaradood oo kala ah
) Caddaalada $34,994
) Xeer Ilaaliyaha Guud $68,733
) Hay’ada Shaqaalaha $76,714
) Hanti Dhowrka $73,657.
Waxa kale oo ay ka badantahay miisaniyada laba wasaraddood oo la isku daray oo ka la ah
) Xidhiidinta Golayaasha $25,610
Waxa sannadkan soo baxay wax been abuur ah oo lagu hafraayo Naafada iyo agoomaha. Naafada iyo Aggoomaha urur kooda sooyal sannadkan missaniyadiisu waxa lagu qoray $22,318 oo tii sannadkii hore ka yar. Waxa kale oo aaynu ka warqabnaa in Aggoomihii markay gaddoodeen wasiirka daakhiligu uu askar u dalbaday kuna yidhi wakhtigii SNMtu wuu dhamaaday ee miisha ka dareera. Aggomihi sidaa loola dagaalamay ayaa hadana lagu magacaabay miisaaniyad ah $1,469, 695. Waxa se caddaan ah in ay hafar tahay iyo been abuur. Tafaasiishiidona waa sidan
) Raashin $266,235
) Staioneryga $712
) Shidalka $4,541
) Musharka $1,193,668
) Habeen dhixida Naafada $1,484 iyo Naafada $3,056.
Stashonery iyo habeen dhixid Aggoomaha loogu tala galay ma jirto ee Sua’shu se waxa ay tahay in xukuumado ay baarlamanka iyo dadkaba soof daran habaabiso ma qawaaniintaay ka mid tahay? Waxa wasaaraduhu ka simanyihiin miisaaniyad loo qoondeeyay waxa lagu sheegay isticmaalka iyo iibsiga qalabka nalka iyo biyaha oo marka la isu geeyo isku noqonaaya $142,552. Dosha waxa aad ka mooddaa wax la garawsan karo marka ad se u kuur gasho waxa soo baxaya laba arin labadaba, waa mid eh wasaarad iyo wasiir bixiya biyo iyo nal midna ma jiro, waa mida kale e qalabka biyaha iyo nalka mar uunbaa la iibsadaa ee joogto ma aha. Waxa la ug yahay in wasiirka Maaliyadu iyo wasiir hore oo arimaha guud ahaan jiray ay ku dagaalameen kuna xagxagteen shaqaalihi biyaha. Waxa iyana miisaniyad gaar ah leh Qareen sabool iyo markhaatiyaasha oo noqotay $9,972. Fikrado waay fiicantahay hase yeeshe weli lama hayo qarren qudha oo ay dawladu qof sabool ah u qabatay lacagtiina u tirisay Waxa kale oo iyana miisaaniyada ku qayaxan Kharash dhan $64,020 oo loogu tala galay Hawlaha magaha iyo xaqsiinta. Haddaba waxa muranku ka taaganyahay ma maxkamada xukunta mise wasiirkaa ku doonana xaq siiya ku doonana daadafiiya? Waxa kale oo jira wax dawladu ay ku sheegto Kharashka yaryar oo isku noqonaaya $42,570. Kharashkaasi waxa uu ka badanyahay miisaaniyada saadex (3) wasaaradood oo ka la ah
) Horumarinta Qoyska $37,004
) Cadaalada $34,994 iyo
) Xiddhiidinta Golayaasha $25,610.
Xoolaha intaa leeg in lagu sheego Kharashka yar yar oo aan xisaab laheyn waa budh cadnimo. Waxa kale oo iyana ah wax lala yaabo
) Kalmada Rugta Ganacsiga $4,748
) Martiqaadka $66,256
) Tababarka Warshedleyda $1,971 iyo
) Kharashka garsooka ciidamada $9,438.
Ugu horeeyn Rugta Ganacsiga dadka ay u adeegto oo ah ganacsatada ayaay tahay in ay xilkiida qaadan dawladana ka madax banaanaadan. Marlabaadka ganacsatada awoodi kartay maal gelinta warshadaha sidiibaay dawladu ugu kharash gareysaa tababar? Tababarka ay se dawlada ganacsatada siineyso maxaay tuur tiida ugu toosin weeeyday. Lacagtan Martiqaadka ku baxaaysaa ee wasiir walba u qoran waa xad dhaaf intiida badana waa la iskaga tagrifalaa maana jiraan dareeq (policy) loo raaci karo oo u dijisan. Ta garsoorka ciidamadu iyana wa mid kale oo lagu qoslo.
Fidinta maamulka iyo hawlaha Bariga sannadkii hore waxa loo qoondeeyay $95,238 sanadkana inka badan toban (10) laab ayo kur u kacay $1,072,860. Markaa waxa aaynu filnaa waa in Burco iyo Borama shilnka S/L lagaadh siiyo iyo Sool iyo Sanaag oo la soo hooyo sanadkan. Waxa dawladu leedahay inka badan toban (10) wasiira dawle. In taas oo Wasiira dawle mid qudha ayaa leh miisaaniyad u gaar ah. Kaasina was wasiira dawlaha wasaarada dibeda (foreign) waxana loo qoondiiyay $10,387. Haddaynu u soo noqono waxbarashada $1,062,928 iyo caafimaadka $650,890 marka la isku darro waxa ay u dhigmaan miisaaniyada Madaxtooyada $1,703,927. Waxa iyana layaab leh miisaaniyada loo qoondeeyay ciidamada Asluubta oo ku dhow hal milion oo dollar ($993,478) taas oo ka badan miisaniyada wasaarada caafimaadka ($650,890) laban laab in ku dhow. Waxaana la u dhan karaa waxa ay is leegyiin miisaaniyada Waxbarashada $1,062,928. Waxa kale oo ay ka badantahay miisaaniyada shan iyo toban (15) wasaaradood oo la isku daray kuwaas oo kala ah
) Qorsheynta $ 43,950
) Reer Miyiga $98, 486
) X. Golayaasha $25,610
) Hantidhowrka Guud $73,657
) Miino Saarka iyo $30,928
Waxa iyo wax ka daran ayay hantidii yareyd ee dumarka agoomaha kursanaaya ee koobka shaaha bacadka ku iibiya laga soo guraayo lagu khasaariiyaa. Waxa an idiin horeysiiyay wasiirka xidhiidhinta labada goli (Xasan Cabdi Buuni) in miisaaaniyadiisa martiqaadku dhan tahay $7,123. Marka aad eegto miisaaniyada wasarada oo dhan $25,610 martiqaadku waxa uu noqonayaa saddex daloollow dalool. Waxa iyana la yaab leh in miisaaniyada kala badh (50%) ay ku baxeyso ciidan iyo wixii xidhiidiya. Marka aad taa ku darto 10% ka ku baxa Madaxweynaha iyo MW/ku-xigeenka waxa miisaaniyada ka soo hadhay 40% oo qudha oo iyagona ku baxaya dalxiis iyo martiqaad.
Walee wadanka sidaa wax u luminayaa meel ma gaadho! Ali Gulaid, San Jose , CA Shaxda Koobaad (1)
Soo Kubida guud EE Missaniyadda Sannaddada – 2005
Description ($1 = 6,739 S/L Shilling) S/L Shilling US$Dollar Qasriga Madaxtooyada 2,600,419,200 385,876 Madaxweyne Ku-xigeenka 1,151,200,000 170,827 W/Madaxtooyada 11,482,761,458 1,703,927 Golaha Guurtida 2,690,134,800 399,189 Golaha Wakiilada 2,849,863,200 422,891 Maxkamada Sare 446,948,800 66,323 Xeer Ilaaalinta Guud ee Qaranka 463,194,400 68,733 Hay’ada Shaqaalaha 516,977,600 76,714 Hanti-dhowrka Guud 496,375,200 73,657 Guddida Qandarasyada 116,932,000 17,352 Hay’da Nerad 186,780,000 27,716 W/Arimaha Dibada 1,870,580,000 277,575 Caddalada 235,824,000 34,994 Ciidanka Asluubta 6,290,707,200 933,478 Maxkamada Hoose 1,956,383,200 290,308 Arrimaha Guddaha 7,253,005,000 1,076,273 Ciidanka Booliska 15,499,411,200 2,299,957 Wafaafinta 1,120,164,000 166,221 Gaashandige 8,198,449,200 1,216,568 Ciidanka Qaranka 39,464,354,920 5,856,114 Qorshaynta 296,182,400 43,950 Maaliyada 14,795,601,571 2,195,519 Ganacsiga & Warshadaha 869,997,600 129,099 Macdanta iyu Biyaha 522,060,400 77,469 Kaluumiysikga 887,002,400 131,622 Beeraha 563,710,400 83,649 Xannanada Xoolaha 644,624,000 95,656 Boosaha & Isgaagsiinta 536,919,360 79,673 Waxbarashada 7,163,075,000 1,062,928 Caafimaadka 4,386,348,000 650,890 Diinta iyu awqaafta 414,108,000 61,449 Dalxiiska 547,649,600 81,266 Hawlaha Guud 3,229,372,800 479,207 Duulista & Gaadidka Cirta 1,473,875,200 218,708 Horumarinta reer Miyiga 663,696,800 98,486 Dib-u-dejinta 340,717,600 50,559 Hay’da N.D.C 248,302,600 36,846 Hay’ada Miina Saarka 208,425,600 30,928 Xidhiidka Golayaasha 172,588,000 25,610 Dhallinyarard & Ciyaaraha 395,652,000 58,711 Guddiga Doorashooyinka 4,752,469,000 705,219 Horumarinta Qoyska 249,368,000 37,004 Total 148,252,211,709 21,999,141 Shaxda Labaad (2)
Kharashka Naafada iyo Aggomaha
Faahfahin US$ Dollar Raashinka Naafada, Aggomaha H/gabka 266,235.00 Stashineriga (stationery) Naafada 712.00 Shidaalka Naafada 4,541.00 Mushaharka Naafada & Agoomaha 1,193,668.00 Habeen Dhixida Naafada 1,484.00 Naafada 3,056.00 $ 1,469,696.00 Shaxda Saddexaad (3)
Raashinka Ciidanka 1,367,714.00 Rashinka Aggoomaha 3,561.00 Rashinka Cisbitaaalka 31,162.00 Rashinka Warshada 4,553.00 Rashinka Maxaabista 216,649.00 Rashinka Naafada, Aggomaha 266,235.00 Rashinka shanta Maxbuus 3,039.00 Kabka Rashinka Ciidamada 116,694.00 $ 2,009,607.00 Shaxda Afraad (4)
Miisaaniyada Hoostimaada Wasiirka Daakhiliga
Ciidanka Asluubta 933,477.85 W/Arimaha Gudaha 1,076,273.19 Ciidanka Booliska 2,299,957.14 $ 4,309,708.18 Shaxda shannad (5)
Kharashka Ciidan iyo sirdoon
W/Gaashaandhiga 1,216,568.00 Ciidanka Qaranka 5,856,114.00 Ciidanka Booliska 2,299,957.14 Ciidanka Asluubta 933,477.85 W/Gudaha 1,076,273.19 $ 11,382,390.18 This entry was posted in Other. Bookmark the permalink.	Comments are closed.